‘भ्रमणलाई सहयोगसँग गाँस्ने होइन, सद्भाव बढाउने हो’
काठमाडौँ, वैशाख ३० गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निमन्त्रणामा नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमणमा आउनुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शनिबार स्वदेश फर्कनुभएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीको यो कार्यकालमा नेपालको तेस्रो भ्रमण हो । प्रधानमन्त्री मोदीको यो पटकको नेपाल भ्रमणलाई परराष्ट्र मामिलाविज्ञ एवं पूर्वराजदूतहरूले मोदीको नेपाल भ्रमण सफल, सकारात्मक र आगामी दिनमा दुई देशको सम्बन्ध नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
डा. भेषबहादुर थापा (पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री) :
भारतीय प्रधानमन्त्री यस पटक जुनजुन उद्देश्य लिएर नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको थियो, ती उद्देश्य र लक्ष्य पूरा भएकाले उहाँ निकै खुसी भएर फर्कनुभएको छ । उहाँका विभिन्न धार्मिक क्षेत्रका भ्रमणले नेपालबारे राम्रै सन्देश प्रवाह भएको छ ।
भ्रमणले के उपलब्धि भयो भन्नुभन्दा पनि दुई देशबीच देखिएका समस्या समाधान प्रक्रियाको थालनी भएको छ । केही क्षेत्रमा सुधारका बाटाहरू अगाडि बढाउने थप आयाम सिर्जना भएको छ । समग्रमा भ्रमण सकारात्मक भएको मान्नुपर्छ ।
डा. जयराज आचार्य (कूटनीतिज्ञ) :
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण समग्रमा राम्रो रह्यो । उहाँको पटक पटकको नेपालको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुँदै जानेछ । यस पटक उहाँले गर्नुभएको जनकपुरको जानकी मन्दिर, मुस्ताङको मुक्तिनाथ र पशुपतिनाथको भ्रमणले नेपालमा धार्मिक पर्यटनको विकास र प्रवद्र्धनमा निकै ठूलो सहयोग पुगेको छ ।
पटकपटक हुने यस किसिमको भ्रमणले दुई देशबीचको राजनीतिक, कूटनीतिक सम्बन्ध अझ बलियो र सुदृढ हुने नै छ । प्रधानमन्त्री मोदीले एकै कार्यकालमा तीन पटकसम्म नेपालको भ्रमण गर्नु र अझै आउने वाचा गर्नु नेपालप्रतिको अगाध माया, स्नेह र प्रेम पनि हो । यस पटकको उहाँको भ्रमण तीर्थाटनका साथै नेपालले दसकौँदेखि प्रतीक्षा गरेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको सुरुआत भएको छ । कुनै पनि राष्ट्रप्रमुखको भ्रमण हँुदा सधैँ सहयोगको मात्र अपेक्षा गर्नु हुँदैन । त्योभन्दा ठूलो कुरा सद्भाव र विश्वास हो ।
प्रा. लोकराज बराल (भारतका लागि पूर्वराजदूत) :
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको यस पटकको भ्रमण निकै सकारात्मक रह्यो भन्ने लाग्छ । नेपाल सरकारले उहाँको स्वागत सत्कारमा पनि कुनै कमी राखेन । उहाँ खुसी भएर फर्कनु भयो भन्ने लाग्छ । मोदी जहाँ जहाँ जानुभयो, ती स्थानका बारेमा भारतमा पनि राम्रो चर्चा र प्रचारप्रसार भयो ।
यो भ्रमणले नेपालको धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्नेछ । त्यसका साथै रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट आदिले पर्यटन प्रवद्र्धनमा ठूलो सहयोग पु¥याउने छ । दुई देशबीच विगतमा केही चिसोपना देखिएको भए पनि उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानले पुराना तिक्तता रहेका भए पनि क्रमशः साम्य हुँदै जान्छन् ।
डा. राजन भट्टराई (परराष्ट्रविद्) :
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण अत्यन्तै सफलतापूर्वक टुङ्गिएको छ । यस प्रकारको भ्रमणले दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध अझ सुदृढ र बलियो बनाउन उच्च राजनीतिको तहमा भएको छलफल र प्रतिबद्धताले आगामी दिनमा अझै बल पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै कतिपय समस्याको समाधान गर्न पनि यो भ्रमणले बल पुग्ने विश्वास गरिएको छ । समग्रमा भ्रमण दुवै मित्रराष्ट्रका लागि अत्यन्तै फलदायी सावित भएको छ ।